Isoso seSpaghetti esizenzele - Ungadliwa
ukuthi wenzeni ngama-fajitas enkukhu asele
iresiphi elula ye-chocolate mousse nge-whip epholile
i-philly cheese steak dipha umpheki ophuthumayo
ngingayithenga kuphi isosi emnandi futhi emuncu
Isoso seSpaghetti esizenzele
I-Sauce yeSpaghetti esenziwe ekhaya iresiphi elula futhi yakudala engasetshenziswa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene!
Ngombili womhlabathi wenkomo kanye nesoseji yase-Italiya, konke kufakwa kwisosi sikatamatisi esimnkantshubomvu! P erfect over pasta, added to I-Lasagna noma Kubhakwe uZiti , futhi ilungele ukucwilisa Izinti Zokudla Okumnandi !
I-Sauce eyenziwe ekhaya ilula!
Le sauce iba yiphunga elimnandi, linambitheka kamnandi, futhi kulula kakhulu ukuhlanganisa!
Ukusetshenziswa okuningi kakhulu Isosi yespaghetti engcono kakhulu ingu-sauce ongusayizi owodwa ongasetshenziswa ngaphezu kwe-pasta, isitshalo seqanda se-parmigiana , noma ngisho nanjengesosi phezu kwezintandokazi zakho Inhlama yePizza !
Faka imifino Le sauce ye-pasta ilula kakhulu futhi iqondile kepha iyisisekelo esihle ongangeza kwimifino oyithandayo uma ungathanda! Amakhowe, i-zucchini, noma i-bell pepper yizengezo ezinhle. Uma ukhetha isinongo esincane, engeza ama-chili flakes angeziwe.
Yenza Phambili Le sauce izohlala izinsuku ezimbalwa efrijini kodwa iqina kahle futhi ngakho ungesabi ukuphinda kabili iresiphi!
Le sauce elula eyenziwe nge-spaghetti isebenzisa i-skillet eyodwa kanye nezithako ezimbalwa ezinomsoco.
INYAMA Ngenkathi ngenza i-pasta sauce nge-turkey yenkomo noma yomhlabathi nje, inhlanganisela ye- inyama yenkomo kanye nesoseji yase-Italy inikeza i-oomph yokunambitheka okuncane kule recipe.
USAZI Le recipe inezinhlobo ezi-3 zikatamatisi, utamatisi ochotshoziwe uyisisekelo, utamatisi oqoshiwe ungeza ukuthungwa, bese utamatisi unama ungeza i-zest.
INGREDIENT ODD Izaqathe ezifakiwe zifakwe kule recipe esikhundleni soshukela . Utamatisi ungaba ne-asidi futhi, ngenkathi ungakwazi ukunambitha izaqathe, balinganisa usoso. (Ngiyangeza kufayela lami le- marinara okuzenzela futhi).
Isitofu Phezulu noma Slow Cooker
Le recipe ingenziwa futhi ibe lula crockpot spaghetti sauce ! Vele upheke inyama bese ukhipha amanoni ngaphambi kokungeza zonke ezinye izithako ku-crockpot.
Ku-stovetop, setha ukubila ngesoso se-spaghetti esiphelele!
Indlela Yokwenza I-Sauce Yespaghetti
Inyama ensundu, anyanisi nogalikhi. Khama noma yimaphi amafutha.
Faka izithako ezisele ( iresiphi engezansi) bese ubila.
Faka isipunu nge-fave pasta yakho bese uyijabulela!
Indlela elula yokuqinisa isosi yenyama yespaghetti ukuyivumela ukuthi iqhubeke ibila ekushiseni okuphansi (okungamboziwe) kuze kube yilapho uketshezi luphenduka kancane.
Ukujiya ngokushesha , ungenza i-cornstarch slurry (izingxenye ezilinganayo zesitashi / amanzi) bese ufaka okuncane ngasikhathi kepha ukuthola ukunambitheka okungcono kakhulu, vele ukuvumele kubile .
Qinisekisa ukuthi awugezi i-pasta ngemuva kokukhipha. Isitashi esise-pasta sizokhipha isoso kancane bese sisiza ukuthi sinamathele kuma-noodle!
I-spaghetti sauce izohlala cishe izinsuku eziyi-3-4 efrijini (futhi ingenye yalezo zokupheka ezinhle ezifana upelepele lokho kubonakala kungcono ngesikhathi)!
Ukuqandisa isosi yespaghetti , umane uphole ngokuphelele, uthele emasakeni efriji, ilebula bese ubeka isicaba efrijini. Lapho wenza isosi yespaghetti, phinda kabili noma kathathu lokhu iqhwa ngakho-ke uzohlala unokuningi esandleni!
Ama-Recipes amaningi we-Zesty Pasta
Isigidi seDola Spaghetti Casserole
I-Pot Spaghetti Pot esheshayo
I-Pasta Rigatoni Ephekiwe
Uyayithanda Le Recipe? Shiya amazwana nokukala ngezansi!
4.94kusukaishumi nanhlanuamavoti BuyekezaIresiphi
I-Sauce elula yeSpaghetti
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokupheka30 imizuzu Isikhathi Esiphelele40 imizuzu Izinkonzo8 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Le sauce yespaghetti iyahlukahluka futhi igcwele izithako ezinambithekayo nezinephunga elimnandi! Ilungele noma yimuphi umpheki wasekhaya! Phrinta Phina
▢1 iphawundi inyama yenkomo enomzimba omncane
▢½ iphawundi Isoseji yase-Italy
▢1 anyanisi omncane kuqoshiwe
▢3 ama-clove ugaliki oqoshiwe
▢6 ama-ounces utamatisi unama
▢28 ama-ounces utamatisi osikiwe
▢28 ama-ounces utamatisi ochotshoziwe
▢¼ inkomishi isaqathe yashizi
▢1 inkomishi amanzi
▢1 amathisipuni Isinongo sase-Italy
▢½ isipuni i-basil eyomile
Isoseji yokupheka, inyama yenkomo, u-anyanisi negalikhi ku-skillet kuze kungabikho pink. Khama noma yimaphi amafutha.
Faka izithako ezisele bese ubila imizuzu engavaliwe engu-30 noma uze uqine.
Khonza ngaphezulu kwe-spaghetti.
Izaqathe ezifakiwe zifaka ubumnandi ukulinganisela ukunambitheka kwe-tart yamatamatisi. Uma ungenazo izaqathe, ungangezela ushukela omncane. Uma ufaka isoseji yase-Italiya kwenye inyama yomhlabathi enjengeyenkomo noma yengulube, bump up the seasonings kancane. Ukujiya i-spaghetti, mayiyeke ibile ingamboziwe kuze kube yilapho uketshezi luhwamuka kancane ngaphandle kwesembozo. Qinisekisa ukuthi awugezi i-pasta ngemuva kokukhipha. Isitashi esise-pasta sizokhipha isoso kancane bese sisiza ukuthi sinamathele kuma-noodle!
Amakholori:295,Amakhabhohayidrethi:17g,Amaprotheni:18g,Amafutha:17g,Amafutha agcwalisiwe:6g,Cholesterol:60mg,I-Sodium:558mg,Potassium:969mg,Umucu:4g,Ushukela:10g,Uvithamini A:1320IU,Uvithamini C:25.2mg,I-calcium:98mg,Insimbi:4.6mg
Igama elingukhiyeisosi le-spaghetti InkamboInkambo Eyinhloko, Isoso KuphekiweIsiNtaliyane© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .